महापात्र | मझेरी डट कम
* मञ्चमा यतिञ्जेल मधुरो प्रकाश छरिएको हुन्छ । कुर्सीमा एकजना लेखक निरन्तर केही लेखिरहेका हुन्छ । नेपथ्यमा एकोहोरो बाँसुरीको धून ? रोदन) सुनिन्छ ।
* मञ्चका विभिन्न भागमा लेखकका सिर्जनाका प्रतिकका रूपमा विभिन्न पात्रहरू ( मानव आकृतिहरू) अस्तव्यस्त रूपमा कालो, सेतो, रातो, पहेंलो कपडाले छोपिएका अवस्थामा छन् ।
* प्रकाश लेखकमा केन्द्रित हुन्छ । लेखक चश्मा फुकाल्छ र त्यसलाई पुछेर फेरी लगाउँदै लेख्न थाल्छ । उसलाई आफूले लेखेको कुरा चित्त बुझ्दैन र लेखेजति मुठि्ठमा कच्याककुचुक पारेर 'डस्टविन'मा फाल्छ ।
* लेखक उठ्छ चश्मा फुकालेर एकपटक क्यानभासलाई हेर्छ र चश्मा लगाउँदै क्यानभासलाई नजिक गई नियाल्छ । लेखकको अनुहारमा अन्योलताको भाव स्पष्ट देखिन्छ । यसपछि ऊ क्यानभासबाट टाढिदै वरिपरि छरिएका आफ्ना सिर्जनाका पात्रहरूलाई, पुस्तकहरूलाई र आफूलाई समेत हेर्छ । हतास मनस्थितीमा लेखक मञ्चको अग्रभागमा आउँछ । हतारिदै कुर्सीमा बसेर केही लेख्न थाल्छ र लेखिसकेपछि त्यो पढ्छ । चित्त नबुझेर च्यात्छ ।
* लेखक जगको पानी पिउँछ । केही राहतको अनुभूति गर्छ अनि शान्त भई ध्यानमग्न मुद्रामा सोच्न थाल्छ । सोच्दासोच्दै लेखक कुर्सीमा नै निदाउँछ ।
* नेपथ्यमा एकोहोरो आलाप सुनिन्छ ।
* आलापसँगै मञ्चको दाँया- वाँया खण्डमा रहेका पात्रहरू मध्ये कालो र रातो रङका कपडाले छोपिएका पात्रहरू चलमलाउन थाल्छन् । उनीहरू छोपिएका कपडा निकाल्छन् र दुवै हातमा कपडा फैलाउँदै तन्द्रामा रहेका लेखकलाई त्यही कपडाले छोप्नका लागि विभिन्न हाउभाऊ गर्दै अगाडि बढ्न थाल्छन् । लेखक आफ्नै सुरमा उँघिरहेका हुन्छन् ।
* पात्रहरूले लेखकलाई कपडाले पालैपालो छोप्न खोज्दै आफूतिर तान्न खोज्छन् । लेखक तानिदैन । उनीहरूले पुनः कोशिश गर्छन् तर सफल हुँ दैनन् । लेखकलाई अप्ठ्यारो महसुस भएपछि तन्द्राबाट व्युझिन्छ । यसपछि भने पात्रहरू दु्रत गतिमा पछाडि हट्छन् र क्यानभासको पछाडि गई अदृश्य हुन्छन् ।
लेखक :( रिसाउँदै) नकरा तँ । तँ अहिले मेरो कुरा बुझ्दैनस् भावना ! (दृढताका साथ) म एउटा अत्यन्तै महत्वपूर्ण कृतिको सिर्जनाको अन्तिम चरणमा छु । यो बेला मेरो कुरा जोसँग पनि हुन सक्छ । यो मेरो जीवनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कृति हो । अहिले म यो जन्माउँदाको प्रश्रव वेदनामा छु । तँ यो कुरा बुझ्दैनस् । तँ यहाबाट गइहाल ।
लेखक : (आवेगमा) तँ के भन्न चाहन्छस् ? ... भावना ! म बहुलाउन लागें ? म पागल हुन लागें ? ( दृढताका साथ) यो तेरो संकिर्ण मानसिकताको उपज हो । बुझिस् ? साधनाको उत्कर्षमा पुगेका लेखकलाई अबुझहरू यस्तो पीडा दिन्छन् भन्ने थाहा छ मलाई । त्यसैले म तँसँग अहिले विवाद गरेर र्व्यर्थमा समय खेर फाल्न चाहन्न । तँ खुरुक्क बाहिर जा त ।
भावना : मैले तपाइको उपन्यासका पात्रहरूको बारेमा कुरा गरेकी हैन । मैले तपाइको घरभित्रका अन्य पात्रहरूको कुरा गरेकी । छोराछोरी कलेज पढ्ने भइसके । तपाइलाई उनीहरूको भविष्यको पटक्कै ख्याल छैन । छोरी सिर्जना अब 'प्लस टु' सकेर मेडिसिन पढ्न बैङ्गलोर जाने कुरा गर्दैथिई । के उसको पढाइका लागि चाहिने खर्चको रत्तीभर पनि पीर? चिन्ता छैन तपाइलाई ?
लेखक : (निहुँ खोज्दै) ल भयो । म यो कुरामा अहिले बहस गर्न चाहन्न । अहिले म मेरो उपन्यासको अन्तिम पृष्ठ टुङ्ग्याउने क्रममा छु । मैले यो आज जसरी भए पनि सिध्याउनै पर्छ । (सम्झाउँदै) एउटा सिर्जना जन्माउन कत्तिको कठिन हुन्छ भन्ने कुरा तँलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ भावना ! त्यसैले सुन् यो बेला मलाई एकान्तको खा“चो छ । मलाई यसरी बारम्बार 'डिर्स्र्टब' गर्न आएको मन पर्दैन । अहिले तँ जा !
भावना : तपाइलाई सधैं आफ्नो इच्छाको मात्र मतलब छ हैन ? के यो घरमा तपाइ बाहेक अरू पनि बस्छन् भन्ने कुराको पटक्कै ख्याल छैन ? हे इश्वर ! मैले यो जुनीमा यो घरमा बसेर कहिल्यै सुखको सास फर्ेन नपाउने भएँ । मेरो कर्मै उस्तो ....
भावना : यस्तासँग के कुरा गर्नु ? मान्छे भए पो ...? आदिम युगको लेखकसँग तर्क गर्नु नै बेकार छ ।
लेखक : (लामो सास फेर्दै ) बल्ल गई ! ... यसले पनि अचेल अनावश्यक रूपमा मेरो कार्यमा हस्तक्षेप गर्न थालेकी छे । यीनीहरूले मेरो महत्व अझै बुझ्न सकेका छैनन् । ....अहँ ! यस्ता झिना मसिना कुरामा म अलमलिनु हुदैन । अहिले मैले मेरो अधुरो सिर्जना पुरा गर्नु पर्छ ।
लेखक : (शंका) प्रमुख पात्र ? (नियालेर हेर्दै ) कतैं तँ ... ?
पात्र १ : मलाइ राम्रोसँग हेर । ... म तेरो उपन्यासको मुख्य पात्र नै हुँ ।
लेखक : ओहो ? तेरो अनुहार त मेरो उपन्यासको मुल पात्रसँग काटिकुटि मिल्छ नि । कतै तँ 'जसमान नेपाली' त होइनस् ?